दशैं-तिहारमा खाद्य सामानमा छुटैछुटको बहार, सरकारले ल्याएको सहुतियतका पसलमा कहाँ र कतिसम्म छुट ? – Clickmandu
दशैं-तिहारमा खाद्य सामानमा छुटैछुटको बहार, सरकारले ल्याएको सहुतियतका पसलमा कहाँ र कतिसम्म छुट ?
क्लिकमान्डु २०७६ भदौ २३ गते १९:२६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सरकारले दशै–तिहार र छट पर्वलाई लक्षित गरि सहुलियत पसल शुरु गरेको छ । बढ्दो मुल्य वृद्धिको व्यापारमा चार्डपर्वमा भए पनि उपभोक्तालाई केही राहत दिने उदेश्यले उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले सोमबार (आज)बाट राजधानीका ९ ठाउँसहित देशका अरु मुख्य ठाउँमा पनि सहुलियत पसल सञ्चालन गरेको हो ।
आजबाट छटसम्म संचालन हुने सहुतियतको पसलमा साल्ट ट्रेडिङ, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र दूग्ध विकास संस्था तथा निजी क्षेत्रका केही संस्थाहरुले सहुलियतमा सामानहरु बिक्री वितरण गर्ने छन् ।
सहुतियतका पसलहरु कहाँ र कतिसम्म छुट ?
यस अवधीमा मुलुकभर साल्ट ट्रेडिङले ३५ वटा, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले २३ वटा र दुग्ध विकास संस्थानले १५ वटा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने बताइएको छ । यस्तै काठमाण्डौमा ३ वटा घुम्ती पसल सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।
सहुतियतका पसलहरु काठमाण्डौ उपत्यकामा कालिमाटी, कोटेश्वर, टेकु, सिंहदरबार, सतुंगल, ललितपुर, भक्तपुर लगायत ९ ठाउँमा सहुलियत पसल संचालन छन् । भने साल्ट ट्रेडिङले काठमाडौं उपत्यकामा तीनवटा घुम्तीसहित ११ वटा पसल सञ्चालन गरेको छ भने उपत्यका बाहिर २४ वटा पसल सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
काठमाण्डौ उपत्यका बाहिर पनि बनेपा, बिर्तामोड, विराटनगर, राजविराज, लाहान लगायतका सहरमा साल्ट ट्रेडिङको सहुलियत पसल सञ्चालन गरिने वाणिज्य अपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ ।
सहुलियत पसलमा नुन, चामल, चिनी, गेडागुडीदेखि मासुसमेत सहुलियत मूल्यमा राखिएको छ । जसमा चामलमा प्रतिकिलो ५ देखी १० रुपैयाँ, चिनीमा प्रतिकिलो ७.५० पैसा, नुनमा २ रुपैयाँ, मसिनो चामलमा तथा गेडागुडीमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिइएको छ । त्यस्तै, जिउँदो च्यांग्रा र खसी बोकामा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
डीडीसी घ्यू ५० रुपैयाँ र पनिरमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिइएको छ भने भनेसहुलियत दिइएको छ । अन्य सामानहरुमा ५ रुपैया देखी २५ रुपैयाँसम्म छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।